के जीवन बिताउन श्रीमान् नै चाहिन्छ त ? आफ्नो मनमा लागेको बिचार कमेन्ट गर्नुहोला – Jagaran Nepal
के जीवन बिताउन श्रीमान् नै चाहिन्छ त ? आफ्नो मनमा लागेको बिचार कमेन्ट गर्नुहोला
के जीवन बिताउन श्रीमान् नै चाहिन्छ त ? जीवन विताउनका लागि श्रीमान् वा श्रीमती नै चाहिन्छ त ? दाम्पत्य जीवन विताउनै पर्छ त ? यसमा एउटा ठूलो जमातले सहमतिको टाउको हल्लाउन सक्छन् । तर, एउटा जमात यस्ता पनि छन्, जो दाम्पत्यलाई ब`न्ध`न ठान्छन्र
त्यसबाट उन्मुक्त जीवन विताउन राजी हुन्छन् । विवाह गर्नैपर्छ भन्नेमा सबैको रा-य मिल्छ भन्ने पनि छैन । कतिपय यस्ता हुन्छन्, जो विवाहलाई अनिवार्य ठान्दैनन् । उनीहरु विवाह नगरी एक्लो जीवन विताउनमै कल्याण मान्छन् । अहिले त केसम्म हुने गरेकाे छ भने,
कुनै पुरुष वा महिलाबाट सन्ता-न जन्मा-उने र अविवाहित आमा वा बुवाको रुपमा जीवन विताउने सम्मकाे चलन भनाै एउटा मान्छेकाे साेचाई बन्न थालेकाे छ ।